Debanye aha na ntanetị - Ụlọ Akwụkwọ Ezinụlọ, Cambridge
Biko mezue ma ọ bụ lelee mpaghara niile achọrọ!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdenye aha na School biko:
Dezue akwụkwọ dị n'okpuru ebe a, a ga-ezitekwa akwụkwọ gị n'ụlọ akwụkwọ.
Debe ihe nkwụnye ego (oge 1 nke ụlọ akwụkwọ na ụgwọ ụlọ na agbakwunye ụgwọ ego n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọdabara) na anyị ga-ede akwụkwọ gị ma dozie ụlọ.
Anyị ga-akwado usoro gị na ebe obibi gị mgbe anyị natara ego gị ma zigara gị Akwụkwọ nke Nkwekọrịta. Ụmụ akwụkwọ na-abụghị ndị EU ga-achọ nke a iji nweta akwụkwọ visa nke UK.
Ejiri ubi na akara (*).
Biko gwa anyị aha gị!
Biko gwa anyị Aha nna gị ma ọ bụ ezinụlọ gị!
A chọrọ ama a.
ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Obodo / Obodo:*
A chọrọ ama a
Koodu Mpaghara / Nzipu ozi:*
Biko HọrọAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua na BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, Plurinational State ofBonaire, Sint Eustatius na SabaBosnia na HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Democratic Democratic nkeCook IslandsCosta RicaCote d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern n'ókèalaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiNụrụ Island na McDonald IslandsNsọ Lee (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, islam Republic ofIraqIrelandIsle nke MmadụIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJọdanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic Ndị Mmadụ Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao Ndị mmadụ Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, nke bụbu Yugoslav Republic ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States ofMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian Territory, N'ịbụPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthelemySaint Helena, nrịgo Jizọs rịgoro n'eluigwe na Tristan da CunhaSaint Kitts na NevisSaint LuciaSaint Martin (French Part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent na The GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé na PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch akụkụ)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia na The South Sanwichi IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard na Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSiria Arab RepublicTaiwan, Province of ChinaTajikistanTanzania, United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad na TobagoTunisiatoro toroTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited States Minor outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela, Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe A chọrọ ama a.
Biko tinye adreesị email zuru ezu, dịka ọmụmaatụ, name@example.com. Enweghị ike ịkekọrịta nọmba ekwentị gị na adreesị email gị. Ozi nzuzo anyị kpuchiri ozi gị.
Kwenye adreesị ozi-e gị:*
A chọrọ ama a. Biko lelee ya na-agbanye n'ọhịa n'elu.
Aha kọntaktị mberede:*
Biko nye aha onye anyị nwere ike ịkpọtụrụ na mberede. Nke a nwere ike ịbụ onye òtù ezinụlọ ma ọ bụ enyi.
Ekwentị ịkpọtụrụ mberede:*
Biko nye nọmba ekwentị nke kọntaktị mberede.
Day01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Ọnwa010203040506070809101112 / Year1900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Ọrụ / Ọkachamara:
Biko gwa anyị otu ị si nụ banyere anyị*
N'ebe a, ị ga-agwa anyị banyere ụdị nke ịchọrọ ịme, ogologo oge na mgbe.
Biko họrọ ụdị ụdị gị:*
General English - 15 Oge nkuziIgwe okwu ike - Nkọwa oge 21Ememe ụtụtụ - 6 awa akwụkwọIELTS Nri Anyasị - 6 awa akwụkwọOge mmalite nke ụtụtụ - 4.5 oge ọmụmụ ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Biko họrọ ụzọ ị ga-achọ isonyere.
Kedu mgbe ị ga-achọ ịmalite? Ọ bụkarị Monday*
Day01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Ọnwa010203040506070809101112 / Year20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Kedu mgbe ị ga - achọchachaa? Ọtụtụ mgbe, nke a bụ Friday*
Kedu izu ole ị ga-achọ ịmụ maka?*
Afọ ole ka ị mụọ Bekee:
Kedu nyocha nke Bekee ị gafere?
Kedu ihe mgbaru ọsọ gị?
Dịka ọmụmaatụ: Nyochaa ịchọrọ ịchọrọ (PET, FEC, CAE, CPE, IELTS?) Ma ọ bụ maka nkwurịta okwu zuru oke.
Anyị na-enye ebe obibi ndị nnabata ma ọ bụ na ị nwere ike ịhazi onwe gị maka ịnọ na UK.
Maka ama ndi ozo gbasara ndi agha anyi na umu ulo anyi, biko gaa na ibe ndi mmadu.
Ị nwere ike ịbata na ebe obibi gị na Saturday ma ọ bụ Sunday tupu usoro amalite.
Biko họrọ ebe obibi gị*
Nkeji ọkaraNri na nri ụtụtụIsiri onwe nriEbe obibi / YMCA (Mahadum)Ebe obibi gị ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Rịba ama: Residential / YMCA (Onye Mmụta Mahadum oge gara aga) bụ ebe obibi onwe ya ma ọ bụ naanị maka ọmụmụ ihe na July-August.
Ọ bụrụ na ị na-ahazi ebe obibi gị biko nye anyị adreesị:
Kedu mgbe ị ga-achọ ịnata ebe obibi gị? Ọtụtụ mgbe, nke a bụ Sunday
Kedu mgbe ị ga-achọ ịhapụ ebe obibi gị? Ọtụtụ mgbe, nke a bụ Saturday
Ị na-ese anwụrụ?
Biko rịba ama: Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị ikwu anyị na-enye ndị na-ese anwụrụ ọkụ na-aṅụ sịga n'ime ụlọ.
Biko gwa anyị banyere ihe ọ bụla allergies ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ pụrụ iche ma ọ bụ mkpa nri:
Ụgwọ na ịkwụ ụgwọ
N'oge ngwa, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ zuru ezu.
Ọnụ ego nkwụnye ego nke nkwụnye ego na-adịghị akwụ ụgwọ bụ ego 1 izu + ụlọ 1 izu + ụlọ akwụkwọ ntinye ego nke GBP 50.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịkwụ ụgwọ niile gị kwụrụ dị ka ndị a: ụgwọ izu nke izu ụka (obere ego ọ bụla) + ụlọ izu ụka x GBUM 50
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na Kaadị Nzuzo, Bank Tansfer, Nyocha ma ọ bụ ego.
Biko lee 'Esi edebanye aha'peeji nke maka ozi akụ anyị na maka esi akwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ.
Ị na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ zuru oke ugbu a?*
Ụgwọ zuru ezu
Biko tinye ego ole ị na-akwụ ugbu a:
Nyefee ngwa gị
Ana m akwado na achọrọ m ịmụ na Central Language School, Cambridge maka ụbọchị enyere. Agụla m na ana m anabata usoro niile na ụdị a na Broshuọ / weebụsaịtị. Enwere m ezi ahụike ma enweghị m ike anụ ahụ ma ọ bụ ụjọ ụjọ ma ọ bụrụ na akọwapụtara ya n'akwụkwọ ozi ma ọ bụ email.
Biko kwado ka ikwenye na i kwenyere n'okwu a*
Ekwenyere m, biko biko ka m debanye aha m! ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Ana m akwado na agụwo m Nzuzo Nzuzo CLS.
Biko kwado ka ikwenye na ị gụọ Iwu Nzuzo CLS*
Agụwo m Nzuzo Nzuzo CLS ghara ịdị irè ọsọ ọsọ
Biko tinye ihe ị na-ahụ*
Site n'iwe oge iji mee nke a, ị na-egosi na ị bụ ezigbo mmadụ. Daalụ.